China Carbon ígwè ịkpụ waya gbara ụlọ ọrụ na-emepụta |TAA
Anyị na-enye ígwè ịkpụ waya si ọhụrụ ígwè waya na ochie taya waya ma.
Ịkwado ndụ ike ọgwụgwụ dị elu n'okpuru ike dị elu, belata ọnụ ahịa oriri.
Ezi okirikiri ọka, nha otu, enweghị agbaji n'oge eji, ogo peening dị elu dị elu.
Kacha dị ọnụ ahịa ma ọ bụrụ na ejiri ya maka peening akụkụ ọgwụ nwere oke ike nke HRC40-50.
Anyị mere nnukwu ọganihu na ihe onwunwe na usoro na ndabere nke usoro mmepụta omenala.
Itinye n'ọrụ elu àgwà alloy ígwè waya dị ka mkpụrụ na elu n'ibu Njirimara na-eme ka ọ dịkwuo ike.
Imeziwanye nka nka waya nke na-eme ka nzukọ dị n'ime ya dịkwuo oke.
Imeziwanye usoro ngafe ọdịnala nke na-adabere kpamkpam na mmetụta iji belata mmebi n'oge ịgbawa ọkụ, na-eme ka ndụ ọrụ dịkwuo elu.
Main nha anyị nwere ike inye: 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 1.0mm.
Nke gara aga: Drum ụdị ogbugba ogbugba igwe
Osote: Igwe anaghị agba nchara ịkpụ waya gbara
Carbon Steel Cut Waya Abrasive
Carbon Steel Cut Waya Shot
Bee ihe mgbasa ozi ịgbawa waya
Bee ọkụ ọkụ waya
Beechapụ eriri waya
Bee ihe Mgbasa Ozi Waya Shot Peening
Bee nha mgbo waya
Bee ihe nchara nchara
Gburugburu Cut Waya Shot
Steel ịkpụ waya maka peening
Steel Cut Waya Shot Maka Mgbọ Peening
Njirimara ngwaahịa Elu ike, ike dị elu, ogologo ndụ ọrụ.Njiji dị ala, obere uzuzu, mmetọ dị ala.Obere uwe nke akụrụngwa, ogologo ndụ ngwa.Belata ibu sistemu mkpofu, gbatịkwuo oge ojiji nke ngwa nbipu.Nkọwa nka nka Chemical mejupụtara% C 0.10-0.20% Si 0.10-0.35% Mn 0.35-1.50% S ≤0.05% P ...
Ihe mejupụtara kemịkalụ C 0.85-1.20% Si 0.40-1.20% Mn 0.60-1.20% S ≤0.05% P ≤0.05% Isi ike HRC 40-50 Microstructure Homogeneous Tempered Martensite ma ọ bụ Troostite Density Form 2g/0 cm . Nkesa nha ihuenyo No. Inch ihuenyo nha S70 S110 S170 S230 S280 S330 S390 S460 S550 S660 S780 S930 6 0.132 3.35 ...
Zinc ịkpụ waya
Emere site na waya zinc dị elu, nke a na-emepụta site na ịcha waya zinc n'ime pellets, ogologo ya na dayameta nke waya ahụ.Zinc Cut Waya dịkwa n'ụdị nwere ntụ oyi nke a na-eji dị ka ihe ọzọ na-adịte aka karịa nkedo zinc.Ndị a dị mma maka ikpochapụ na imecha ihe nkedo anwụ, na-adịkarị na akụrụngwa mgbawa wheel.Dị n'ọnụọgụ ndị tozuru oke, ngwaahịa anyị na-ebelata ịka nká na akụrụngwa mgbawa ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ abrasives ọla ndị ọzọ....
Atụmatụ * Enwere ike iji dochie ọtụtụ ájá ịnweta mineral & abrasives na-abụghị ọla, dị ka corundum, silicon carbide, arenaceous quartz, beads glass, wdg.* Nwere ike dochie akụkụ nke usoro pickling.* Mgbapụta uzuzu dị ala na gburugburu ebe ọrụ dị mma, na-ebelata ọgwụgwọ pickling.* Ọnụ ala zuru oke, ndụ ọrụ bụ ugboro 30-100 na ...